Mmetụta nke coronavirus Covid19: ahụike na mbenata mmetọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmetụta nke coronavirus Covid19
Ọrịa coronavirus adịworị ezigbo ihe gburugburu ụwa. Ihe malitere dị ka ikpe dịpụrụ adịpụ na China abụrụla ọrịa zuru ụwa ọnụ. Enwere ọtụtụ mmetụta nke Covid19 coronavirus maka ahụike mmadụ na gburugburu ebe obibi. Ekwesiri ikwu na maka nke ikpeazu, coronavirus bara uru.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ihe ndị bụ mmetụta nke coronavirus Covid19.
1 Oria niile n'ụwa
1.1 Gịnị bụ coronavirus
2 Mmetụta nke coronavirus Covid19
3 Mmetụta nke Covid19 coronavirus na mmetọ
Oria niile n'ụwa
N'ime mba ndị nje a zuru ebe niile, anyị na-ahụ China, Italy, Germany na Spain. Facilitylọ ọrụ maka nje a na-agbasa site na otu onye ọbịa gaa na nke ọzọ na-eme ka ọ dị oke egwu. Dị ka ọ dị n'ọrịa niile, enwere ụfọdụ ndị bi n'ihe egwu nwere nsogbu ka ukwuu gbasara mgbasa nke ọrịa a. N'okwu a, ndị gaferela afọ iri ise ndị nwere nsogbu mbụ dịka ọrịa shuga, ọrịa kansa ma ọ bụ nsogbu iku ume nwere njọ karịa ndị na-eto eto siri ike.
N'ịbụ onye nwere ọrịa na-efe efe na ọsọ ya, gọọmentị Spain ewepụtala ọnọdụ mkpu maka ụbọchị 15. Nke a akpọpụla ndị niile a manyere ịnọ n'ụlọ ogologo oge o kwere mee. A na-ahapụ gị ka ị gaa ịzụta ihe dị mkpa ma dị mkpa iji nwee ike ịkwado onwe gị na ụfọdụ mkpa ndị dị mkpa dị ka ịgagharị nkịta ma ọ bụ ịga ọrụ.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ na-ekwurịta okwu na-enye ha ohere ịga n'ihu ụbọchị ọrụ ha site n'ụlọ. Mkpọchi ụlọ bụ otu n'ime atụmatụ iji nwee ike ịchịkwa mgbasa nke nje ahụ ma nwee njikwa ahụike ka mma iji zere afọ ojuju.
Gịnị bụ coronavirus
Nje virus a na-ebute ọrịa na-efe efe nke coronavirus kpatara na Wuhan na Disemba afọ gara aga. Coronavirus Ha bụ ezinụlọ buru ibu nke nje virus nwere ike ịkpata ọrịa dị iche iche na mmadụ na anụmanụ. Typesdị ọrịa na-efe efe na-ebutekarị nje virus sitere na anụmanụ ndị na-eji ribonucleic acid eme ihe dị ka mkpụrụ ndụ ihe nketa iji nwee ike ịrịgo ma mechaa bufee ya na ndị ọzọ dị ndụ. Isi ihe a na-enyo enyo na ọ bụ mmalite nke Covid19 coronavirus bụ ụsụ.
Enwere ụfọdụ nyocha na-ekwu na ọ ga-abụ na ọ bi na agwọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ ejiriwo nje a tụnyere ọrịa ahụ, ọrịa na-efekarị na-akpata ọnwụ dịkarịsịrị nta nke ndị butere ya. N'ihe banyere coronavirus, enwere ike ịnwụ nke 3.4% nke ikpe yana nke ọrịa nkịtị na-erughị 1%. Amabeghị ma ọ nwere akparamagwa oge, yabụ anyị amaghị ma ọ ga-amalite ịgbada na mbata nke oge opupu ihe ubi na mpaghara ugwu.
Otu n'ime ihe omimi gbara gburugburu nje a bụ ikike ya ịgbanwe. Nke a ga-abụ ihe na-agbanwe agbanwe iji mara ma ụdị ọgwụ mgbochi ga-ezu iji kpochapụ ya ma ọ bụ na ọ ga-alaghachite oge ọ bụla n'ụzọ dị iche. Nje virus ahụ hapụrụ Wuhan abụghị otu ihe ahụ rutere Spen. Nke mbụ SARS-CiV-2 genomes zuru ezu ka enwetara site na ikpe mbụ emere na mba a ma ekpughere ya na ọ na-agbanwe mgbe niile.
Ọ bụ ezie na ezughị ezu mara na anyị nwere ike ị nweta nkwubi okwu doro anya banyere nnyefe ya, enwere ọtụtụ njirimara ahụike nke ọrịa ahụ na ogo mgbasa nke na-enyere anyị aka ịme ụfọdụ ihe. Fọdụ n'ime ihe mgbaàmà kachasị nke ndị ọrịa na-agakarị bụ:
Ahụ mgbu na-arịa ụfọdụ ndị ọrịa
Imuchi mkpọchi ụfọdụ
Rhinorrhea abụghị na ndị ọrịa niile.
Akpịrị mgbu na ụfọdụ ndị ọrịa
Afọ ọsịsa na ụfọdụ ndị ọrịa.
Ihe mgbaàmà ndị a na-adịkarị nwayọọ ma na-apụta nke nta nke nta. Offọdụ ndị butere ọrịa ahụ enweghị otu n'ime mmetụta na mgbaàmà ndị a ọ naghịdị arịa ọrịa. Naanị otu onye n’ime mmadụ isii na-emegide nje ahụ na-ebute ajọ ọrịa nwere nnukwu nsogbu iku ume. Ndị a bụ ndị agadi ọkachasị na ndị yiri ka ha nwere ọnọdụ ahụike gara aga dịka ọbara mgbali elu, nsogbu obi ma ọ bụ ọrịa shuga. N'ọnọdụ ụfọdụ dị njọ karị ọ nwere ike ibute oyi baa, nnukwu ọrịa iku ume na akụrụ akụrụ.
Lọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na-eme atụmatụ na mgbaàmà nwere ike ịpụta n’ime nanị ụbọchị abụọ ma ọ bụ karịa karịa ụbọchị iri na anọ e kpughere ya. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ndị na-ahụ maka ọrịa na-efe efe na-atụ aro na oge incubation maka coronavirus ọhụrụ a nwere ike ịbụ ụbọchị iri abụọ na anọ.
Mmetụta nke Covid19 coronavirus na mmetọ
Ọ bụrụ na anyị enwetala ihe ọma na ọrịa a, ọ bụ nbelata mmetọ ụwa. Mkpọchi na mbelata nke ịba ụba ụgbọ ala enyerela aka na mma nke ikuku n'ọtụtụ mba. O meela ka mbelata ọrụ nke ụgbọ njem site na iji ugbo ala ọkụ ọkụ.
Naanị izu ole na ole gara aga ka e bipụtara ụfọdụ ọmụmụ ihe onyonyo na satịlaịtị nke na-egosi etu ọgba aghara a na-efe ebelatala anwuru CO25 niile dị na China site na 2% ma gosipụta mbelata dị ukwuu na Italy na ịta ahụhụ nke ndị na-emetọ ihe dịka nitrogen dioxide nke na-emetụta ikuku ikuku n'ụzọ na-adịghị mma ma bụrụ gas.
Mmetọ ikuku adabala nke ọma mgbe coronavirus na-eme ka ụmụ amaala niile kpọchie onwe ha n'ụlọ. A na-ebute mmetọ mmetọ ọkachasị site na ọrụ mmadụ ebe ọ bụ na ikuku sitere na ọkpọkọ na-ekpofu ọkụ na ọgbọ eletrik. Ọ kachasị osisi ọkụ na-ere ọkụ nke na-eme ka ikuku carbon dioxide na-abawanye. N'ihi mgbochi mgbochi, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mechiri emechi ma jiri obere ume.
Na Madrid na Barcelona, ​​ikuku ikuku amalitela ịkwalite mgbe ọnọdụ mkpu mkpu Isi mkpịsị aka aka maka nnu. Enwere ike inwe obere ọdịiche dị na data nke igwe ojii ndụ na mgbanwe ihu igwe, ọ bụ ezie na o doro anya na Mbelata ihe ọkụkụ dabara na mkpọchi na Italytali bụ ebe a na-ahụkwa mma ikuku.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmetụta nke Covid19 coronavirus.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mmetụta nke coronavirus Covid19